1. Gini bu ọhụụ nke MEDx ahụ ike center?
To be the #1 dijitalụ nke ụlọ ọgwụ nke ineye metuta ọru nke ọgwụ na ahụ ike ya na ndi okachamara ka ha nwere ganiihu ezo udo na e maka ka ahia nke 2025 mmubanye .
2. Gini bu ọhụụ nke MEDx ahụ ike center?
E welie ahụ ike na ikeke ọgwụ,ohere ya na mmubanye h
3.Gịnị mere MEDx Health Center?
maka nke ahumihe onwe onye choputara Anyi fọrọ nke nta lactitia efulahu anyi n'ihi.Anyi agwọ ya nke Tyhoid ma na o na ata ahụhụ ịba. Mgbe oge gasara nke anyi na agwọ tyhoid, aru megwara idiok idiol ndinọ ọgwụ ma na ndi keogwu okachamara di gburu gburu amaghi ihe a na eme. Ọ dabara nke ọma anyi maara onye nosi na agbata obi anyi nwere uzo di nmma basara ọrịa. Anyi ruru ya, ya etinye aka na oge e maka ka onye ọrịa nwere eziigbo nchoputa na ọgwụ nke tụgharịa ọnọdu gburugburu .
A otu ahumihe naanị, kwuo okwu dị mpịakọta banyere ụfọdụ n'ime ihe gbara ọkpụrụkpụ ihe metutara elekọta usoro obodo. n'elu mekwuo nnyocha, anyị ghọtara na ọtụtụ eto ahịa keere òkè commonality nke mgbọrọgwụ ihe metutara ha usoro elekọta .
4. Onye Malite echiche MEDx Health?
5. o lee mgbe ka atụ anya ndi MEDx health center emejuputa atụmatụ ha?
Anyi na aụrsị ọrụ ike e nwere elekota nke ika mkpa ya na nke tertiary larịị njikwa ọrụ gụnyere nke ugbu dị isi. Anyị na atụ anya inwe o juju arụmọrụ n'ime 2017.
6. Onye bụ lekwasịrị ogbako nke echiche?
Onye ọ bụla chọrọ eche Banyere eto ahịa
Ahụ ike ọkachamara si eto ahịa
Ahụ ike ọkachamara si mepụtara ahịa
N'Ógbè Ndị Juu ma ọ bụ onye ọ bụla n'okpuru ịkwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ nke ndị ikwu
Anyị bụ ndị a n'elu ikpo okwu na-enye ihe na-ina nke ọgwụ ọkachamara nlereanya na ike ịnye ọnụahịa na ike payment nlereanya ịzọpụta onye na ezinụlọ ndụ gafee abụrụ ụwa.
8. olee otu inye aka agbasa okwu a?
Soro anyi na ntaakụ
9. otu eji nwere MEDx health center
Pịa na njikọ n'okpuru na-akọwa usoro.Ọ dị mfe dị ka:
De banye nkọwa akaụntụ na ezinụlọ gị
Ị dị njikere amalite inwe mmekọrịta nke ọgwụ ọkachamara (chọọ, mee ọhụhụ,akwụ ghoro jụ ezinụlọ gi maka e ikwụ ugwọ ma na kwe ka dọkita gi debe nkọwa basara ahụ ike gi failụ gi)
10. Olee otú e ji haziri akaụntụ ha na imaneeji ?
Naanị gị bụ onye nwere ohere nke akaụntụ gị
ikwu na ibe gi nke agunyere na akụntụ, nwere ike nlebazi anya na ihe nhọputa ya na nke nkọwa basara ahụ ike ya.
11. Gịnị ka dijitalụ ụlọ ọgwụ pụtara?
Dijitalụ n'Ụlọ Ọgwụ bụ njedebe na-ọgwụgwụ,otu nkwụsị ahịa nke ọgwụ na ahụ ike ọrụ online (Expuchi isi,nke abụỌ, na elekota nke atọ gbakwunyere njikwa ụlọ ọgwụ ha niile nu na fingertips ya nke onye ahia anyi.
12. Olee otú e ji haziri okwukwu?
Anyi nwere uzo atọ e ji akwụ ukwo nke ahu ike gi:
Edebe nkọwa basara ahụike nke ezinụlọ n'ịntanet ka.
Akwụ ụgwọ nke ahụ ike na ịntanet, ya owne.
irio onye otu nke ezinụlọ na akụkụ nke uwa maka ikwu ụgwọ nke ahụ ike na ịntanet .
13. Nke ụdị ọgwụ ọkachamara nwere ike i chọta on MEDx Health Center?
GP (General Practitioners) na ọtụtụ ndị ọkachamara na-depụtara na anyị n'elu ikpo okwu.
14. Olee ụdị ahụike akụrụngwa m ga-ahụ na MEDx eHealthCenter?
Obodo na zuru ụwa ọnụ ahụike ihe, isiokwu na-agwa okwu isiokwu gburugburu ọrịa, ọgwụ ọjọọ, ahụike na nsogbu na ọhụrụ nnyocha na mmepe.
15. O Bụ onye pụrụ inye ahụike akụrụngwa na MEDx eHealthCenter?
Onye ọ bụla nwere ike ịmepụta isiokwu, ihe omume ma kee ya.
16.Gịnị mere ka ndị ikwu na ibe m ji jikwaa ma na elekọta usoro nke profaịlụ m?
ọ bụ na i bụ iku na ibe m:
Ụmụaka nwere aadịghị ala ala ọrịa.
Ezinụlọ nwere isi mgbaka.
onye Ọrịa ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ.
onye na elekota na amaghi .
onye na achoo elekota na nwere ego. The ikpo okwu bara uru nwere nti mmetụta na gị na onye òtù ezinụlọ si a ihe ọmụma,akụ na ụba na ọgwụ na ahụ kwado ele ihe anya.
Ị nwere ike iji n'elu ikpo okwu iji mmetụta ndị ikwu gị si a ihe ọmụma, akụ na ụba, ahụike kwado si ele ihe anya
17. Gịnị mere ndị ikwu na ibe gi akwụ ụgwọ ụlọ gi?
Ebe ọ bụ na ọtụtụ mba na-arụ ọrụ a si n'akpa uwe usoro ahụike ( Dighi akwụ - No ọgwụgwọ). e maka onye bụla tinye oge ya na atụnye ụtụ.Anyị haziri usoro iji hụ na onye ọ bụla nwere ohere ọgwụgwọ n'oge ọ bụla..
18. Olee otú m ga eji mee ka enwere lewa onwa hụ na a kwa ọnwa nke ahụike MEDx Health Center?
Usoro a di mfe ịpị aka e mara nke foro afo na MEDx ma bụ etinye ego na owne gi, ma bụ irio ikwu na ibe ka ha tinye ego kwa ọnwa ọ bula .
19.Kedu uzo di iche iche ka ndi MEDx eHealthCenter ji e nwere ndụmọdụ?
Ugbu anyị na-enye usoro alo nke anụ ahụ, ma na arịọ uche nke abụọ. anyị na ebumuche enye ihe odide na nke oniony..
20. Enwere ike e kee nkọwa banyere ahụ ike m na okwukwe na ntukwasiobi?
Ee maa. anyi nwere usoro e chekwara chekwa. otú o sina di o di mkpa ka echetara gi mgbe niile ka gi igbati ahu e mara onye e na agwa maka nkọwa basara ahụ ike gi. dọkịta gi chọrọ masisri gi mgbe dum tupu o kee nkọwa basara ahụ ike gi.
21. O di ka na ndi elekota ahụ ike bu di okackamara nwere ike e kee nkọwa banyere ahụ ike nye di ọzọ na gwara gi agwa
Mba, ha ga eme ka gi mara tupu ha kee nkọwa banyere ahụ ike
22. O lee ebee n'ga chọta ogbugbaume basara ajụjụ oge obụla nwere ajụjụ
biko, were ikori ohere, kọntaktị nke anyi ka gi kpọtụrụ anyi
23. ọ bụrụ na m nwere mmasi ibu otu onye nnọchiteanya na obodo nke MEDx eHealthCenter ?
kpọtụrụ anyi nainfo@medx.care
Biko akpọtọta ozi na ajụjụ di ukwuu nke kwere gi na gburugburu gi tupu anyi mkparita uka.
Gini bụ saiz ahia gi (ogugu, Diaspora,achọ elekọta nime afọ na ìgwè, ọnụ ọgụgụ ndi okachamara na ahụ ike n'ógbè gị)?
Ego ole GDP na-ekenyela ahụike?
Kedu ndi mmadu olee were amụma mkpuchi ma bu inwe amụma mkpuchi
Kedu otú elekota ahụ ike nke ọha si di?
Kedu otú elekota nke na abughi nke oha si di?
elekota ahụ ike na nke na abughi nke oha nwere digitized oge ugbua?
ọ bụrụ na o bu eziokwu, kedu kento aka ka o di digitized na gini ọzọ ka nwere ike eme?
Kedu otú onye na weta elekota ga adi ma ọ bụrụ na ọ nwere usọrọ akwalite ha ?
Kedu otú onye na weta elekota ga adi ma ọ bụrụ na ọ nwere usọrọ nke ga enyere ha aka na ịkwụ ụgwọ n'uzo ahazi ahazi n'ụwa nile?
Kedu otú onye na weta elekota ga adi ma ọ bụrụ na ọ nwere usọrọ nke ga mee ka ha nweta akụkọ ihe mere ahụ ike onye ọria nke na abia ha?
Kedu otú onye na weta elekota ga adi ma ọ bụrụ na ọ nwere usọrọ ịrịọ uche nke abụọ sita na ndi na elekota banyere ahụ ike nwa nile bụ ndi okachamara ?
Bụ obodo na-emeghe iji dijitalụ n'elu ikpo okwu jikwaa ha nlekọta ahụ ike na kamakwa ezinụlọ ha ahụike?
Bụ obodo na-emeghe ịjụ maka nke abụọ na uche si elekọta ndị na enye mba ọzọ?
24. Ị nwere mmasị isonyere anyị bu di maara ihe mpia otu?
Kpọtụrụ anyị na human.resources@medx.care
CV (Include VOIP details, Include MBTI details) n'ihi na oriri mkparịta ụka.
Akpali Leta ma ọ bụ Vidio (N'ịkọwa nzube ná ndụ gi na ihe akwọta gi).
25. Olee otú ọhụrụ ọgwụ ọkachamara ahụ anya site niile MEDx Ọrụ?
Bụ nani ka onye na ewta onye elekota ka ọ kee profịlụ na n-bịanyere aka di ka onye na ewta onye elekota (gbaa mbọ hụ na ị bịanyere aka di ka onye na achọ elekota ).
26. Olee otú m ga eme ka dọkịta nke na elekota maka ahụike bu onye ọkachamara n'ma na m mere nhọpụta nke ọhụrụ
ị nwere ike iwere ochucho enjin anyi; ọ di n'elu ihuakwukwo anyi.
27. ị nwere ike iwere nhọpụta site na dọkịta nke na elekota maka ahụike bu onye ọkachamara?
28.ọ dị mkpa ka n'ịkwado eziokwu nke di na nhọpụta nke m nwere na ndi dọkịta nke na elekota maka ahụike bu ndi ọkachamara?
mba. oge akara aka deputara na oru akụkọ ihe mere eme pụtara n enwere nnweta na kalenda na dọkịta na elekota banyere ahụike bu di okachamara , gbakwunyere....nke putara na ndi acho elekota banyere ahụike ha na ikwu na ibe ha a kwụrụ ụgwọ ahụike ha .
29. inwe ike ka onye hụ maka ahụ ike bụ onye okachamara ya na onye na achọ onye ga elekota ya kagbụọ ogeatọrọ ya?
ee... ha abụọ nwere ike ikagbụọ; ma biko guo maka iwu n'kagbụọ anyi ka e wee ghota owne unu's rights iwu kagbụọ
30. Ebe ka nwere ike ichọta nnyocha keego azụmahia di ka okachamara na elekota ahụ ike?
mbiakota nke a ge kwukwara
31. Ebe ka nwre ike ichọta nnyocha nke ego azụmahia di ka onye na acho onye ga elekota m?
Biko leru anya nke foro afo na MEDx.
32. Gini bu iwu anọgideghi n'ikee ndeko banyere ahụ ike gi ya na ikee oge ndụmodụ?
33. ọ ga-ekwe omume ka onye orụ mepetu isiokwu banyere ahụ ike ya na nke omume?
Eee...anya na ijaliobi onye obula ekere ihe ọmụma ya. ya mere biko basa obi gi n'ikee echiche na ucheobi banyere ahụ ike gi ya na ihe mmeeme nke na ga gburugburu gi
34. olee otú n'ga eji mee ka arịrịọ nke abụọ irubeisi ?
Nke a di mfe na họrọ di ka onye ga -eweta onye ga elekota na e maka arịrịọ irubeisi site na ndi na hụ maka eweta onye elekota di ka uche nke abụọ ma na ọbụghi ịcho ndụmọdu . Oge mgbe niile cheta ekee ihe ndekọ banyere ahụ ike gi ha na nkọwa ịcho ndụmodụ tupu ezuko ikee uche nke abụọ onye na eweta onye elekota.
35. ọ bụ na MEDx ji HIPAA nke gbasara ama ejije?
36. olee ụdị akụrụngwa nke onye otú ọlụlụ ka MEDx ji ?
MEDx ji IBM ihe nzuzo na ihe siri ike chekwaa ya gburugburu ebe obibi e maka n'chebe na ngwangwa di na ndionye ọrụ ha .